Ilyaas Bare ?Aqoonsiga muwaadiniinta Kenya waa in la siiyaa caruurta qaxootiga ku dhashay Dhadaab? – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2013 6:52 b 0
Nairobi, October 26, 2013 – Guddiga difaaca ee baarlamanka Kenya ayaa ku celceliyey in qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab ay mudan yihiin in lagu celiyo dalkooda, in kastoo ay xiligan qorshaha ku dareen in dadka ku dhashay xeraha karaarka aqoonsiga muwaadiniinta.
Xilibaan Ilyaas Barre shiil oo laga soo doorto deegaanka woqooyi Bari Kenya kana mid ah guddiga difaaca Baarlamanka dalkaas, waxaa uu xusay in ay muhiim tahay mar kasta in dadka qaxootiga ah lagu celiyo dalkooda, balse waxaa uu ku baaqay dadka ku dhashay Kenya in la siiyo aqoonsi.
?Muwaadiniin weeye dadka ku dhashay xeryaha waa in la siiyaa aqoonsi, qeybtood waxay mudan yihiin in dunida loo qaybiyo sida reer Yurub iyo America, halka kuwa kalena lagu celinayo dalkooda.? Ayuu yiri Xilibaan Ilyaas Barre
Gudoomiye ku xigeenka guddiga difaaca Baarlamanka Kenya waxaa uu hadalkiisa ku sii daray, ? maaha in dadka been loo sheego, amni xumida iyo argagixisada ku jira xeryaha maaha mid aan marmarsiiyo ka dhiganayno, laakiin waa xog sirdoon oo la helay.
Guddiga difaaca Baarlamanka Kenya waxay sheegeen in ay jiraan kooxo Argagixiso ah oo degan xeryaha isla markaasna dadka ku dhex dhuunta ah, waxaa uu cadeeyey xilibaan shiil in ay mar kasta helaan macluumaad sirdoon oo sheegaya in amniga goobaha uu yahay halis, hay?adaha iyo askarta amaanka xataa ayasan geli karin.
Hay?adaha xuquuqda Aadanaha Qaramada midoobey ee Amnesty iyo Human Rights ayaa labbaduba si kulul u dhaleeceeyey qorshaha Kenya ku doonayso in ay ku celiso dadka qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab.
Qaramada Midoobey oo Kenya la hubinaysa amaanka iyo xasiloonida dalkaas oo muhiim u ah gobolka